Ama-disco ahamba phambili, amakilabhu nemigoqo e-Asia | Izindaba Zokuhamba
Ama-disco ahamba phambili, amakilabhu nemigoqo e-Asia (Ingxenye 1)
Izikhangibavakashi asia | | China, i-Hong Kong, Ukuzilibazisa, Beijing, Amabhishi, Shanghai, Singapore, Ukuhamba kwe-Asia
Imvamisa lapho sicabanga ukwenza uhambo lokuya Asia Kufika engqondweni, ukuvakashelwa kwamangcwaba, amasiko asendulo, ezokuvakasha zenkolo, uhambo lokuya ezindaweni eziningi, amabhishi aseparadisi, i-gastronomy engajwayelekile, nobuchwepheshe obuthuthukile. Kodwa-ke, lokho akuyona ukuphela kwento inikezwa izwekazi elihle laseMpumalanga Ekude. Ngalesi sikhathi sithathe isinqumo sokulungisa umhlahlandlela ohlukile wezokuvakasha, sifuna ukuzijabulisa kwasebusuku. Ingabe usukulungele ukuvakasha amadisco amahle, amaklabhu nemigoqo e-Asia? Nazo-ke…
Isithombe: Way Faring
Ama-nightclub awanalutho lokufisela ama-nightclub amakhulu. ENew York o Ibiza. I-Asia inayo into yayo, futhi abantu bayo bayazi ukuzijabulisa kahle kakhulu. Iningi lababheka njengenye yamakilabhu amahle kakhulu e-Asia esithola “Umhlaba we-Suzie Wong”, Igama elihlekisayo le-nightclub. Yebo, uma ufuna ukwazi le ndawo kuzofanele siye kuyo Beijinge China. Le ndawo, ethandwa kakhulu ngabantu bendawo, ikhethekile ukuphuza ngemuva komsebenzi onzima wosuku. Kuyiqiniso, thina njengezivakashi ngeke siyofuna ukuphumula ngemuva kwehhovisi. Kodwa-ke, kuyindlela enhle kakhulu ukuchitha umzuzu omnandi. Uzoba nentshisekelo yokwazi, uma ungowesifazane, ukuthi ngoLwesithathu ubusuku besifazane kuze kube ngu-11 ebusuku, ngakho-ke ukungena kwabesilisa akuvunyelwe kuze kube yileso sikhathi.
Photo: UMaximilian hecker
Siyaqhubeka nokuzungeza insimu yamaShayina bese siya khona Shanghai. Lapha sizojabulela ku- I-ARK Live House yedwala elihle kakhulu eChina. Uma ungumthandi womculo ufuna imisindo emisha, khona-ke le ndawo ilungele ukwazi okuhle kwamaqembu esizwe. Ufuna ukuzijabulisa ku- i-Hong Kong? Ama-nightclub anconywe kakhulu lapha yi-C Club, iQ Q Club (ihlinzeka njalo ngama-DJ aphesheya omculo we-elektroniki), iHei Hei Club kanye ne Iklabhu Yezindiza. Lesi sakamuva singesinye sezindawo ezikhetheke kakhulu endaweni, samalungu kuphela futhi esakhiwe ngumklami wezimboni odumile waseFrance uPhilip Starck. Kuyafaneleka futhi ukukhuluma nge Iso leDrako, iklabhu ekhethekile kakhulu, elihanjelwa amamodeli kazwelonke, abalingisi nabahlabeleli. Usuyazi vele, uma ufuna ukusondela kusethi yejet yaseChina kufanele uze lapha.
Photo: i-kev / null en Flickr
Yaziwa njengenye yamakilabhu amahle kakhulu emhlabeni, UMnyango Wezomsindo, futhi inendawo e-Asia, ngokunembile ku Singapore. Kunconywe kakhulu kulabo abathanda umculo we-elekthronikhi. ISingapore iyaqhubeka nokusimangaza ngobusuku bayo obumnandi futhi isisazisa kwezinye izindawo ezinjenge Isikhungo & Embargo y umfece.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » Ama-disco ahamba phambili, amakilabhu nemigoqo e-Asia (Ingxenye 1)
IMilan, inhlokodolobha yemfashini (Ia)
I-Pacasmayo: Ibhishi, amasiko namagagasi